हार्दिक बधाई : मधेसी महिला बाट पहिलाे पटक इन्सपेक्टरमा नाम निकाल्न सफल प्रतिभा लाई ! « गोर्खाली खबर डटकम
यो पनिपढ़नु होस। :अमेरिकामा एक महिलाको शव अजिङ्गरमा लटपटिएको अवस्थामा फेला परेको छ। उक्त अजिङ्गर ८ फिट लामो थियो। सबैभन्दा अचम्म लाग्ने कुरा त यो छ की, मृत फेला परेकी महिलाले आफ्नै घरमा करिब १४० वटा सर्प पालेर राखेकी थिइन्।
लोराको शरीरमा लटपटिएको सर्प छिमेकी शेरिफको होे। जुन महिलाको घरमा पसेको थियो।
प्रकाश सपुत को गित हेरेर रो,एका पुर्व सिडियोले भने आफ्नो कम,जोरी लुका,उन गीत हटाउन द,बाब दिन मिल्छ ? (भिडियो सहित)
ह्वात्तै घट्यो फेरि सुनको मुल्य,तोलाको कतिमा कारोबार हुदै